Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Ethernet | Warshad Ethernet Switch1
Beddelashada Ethernet 1
24 Port L2 / L3 Ethernet Switch ZJ8300-28G-4TF
24 Port L2 Management Ethernet Switch, waxay bixisaa 350Gbps awoodda beddelka, waxqabadka ugu sarreeya; Haysashada waxqabadka gudbinta 96Mpps, L2 / L3 silig ‐ xawaaraha gudbinta. Naqshadda qaabku waxay bixisaa 24 dekedood 10/100 / 1000M fiber Ethernet RJ45, iyo 4 dekedood 10G SFP + slot, 1 Console port. Bixi bandwidth ku filan isu geynta iyo isdhaafsiga xogta aasaasiga ah. Isticmaalayaasha waxay dooran karaan dekadaha 10G iyadoo loo eegayo baahida loo qabo in la hubiyo shabakadda hawlgal xasilloon iyo isku xirka dheelitirka culeyska. L2 10G Maareynta ku beddelashada duubka sare ...
8 Port 100Mbps Ethernet si Fiber Switch Model ZJ-100108-25
10 / 100M Optic Fiber Switch waa warbaahinta 100BASE-FX Ethernet copper ilaa 100Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 8 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Beddelka Fibirka Fudud, Habka Keliya Laba Fibbaar • Kala-badh ama wada-xaajood auto-gorgortan buuxa • 10/100 Mbps wada-xaajood otomaatig ah oo loogu talagalay dekedda naxaasta • Auto MDI ...
4 Port 10 / 100Mbps Ethernet + 2 dekedda Fibre Optic Beddelashada Model ZJ-100204-25
10 / 100M Optic Fiber Switch waa warbaahinta 100BASE-FX Ethernet copper ilaa 100Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 4 Port 10 / 100M Ethernet + 2 Port Fiber Switch, Single Mode Dual Fiber • Kala badh ama wada-xaajood wada-xaajood buuxa ah • 10/100 Mbps wada-xaajood otomaatig ah oo loogu talagalay dekedda naxaasta • Auto MDI ...
4 Port 100Mbps Ethernet oo Fiber Switch Model ZJ-100104-25 ah
10 / 100M Optic Fiber Switch waa warbaahinta 100BASE-FX Ethernet copper ilaa 100Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 4 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Beddelka Fibirka Fudud, Habka Keliya Labada Fibbaar • Kala-badh ama wada-xaajood wada-xaajood buuxa ah • 10/100 Mbps wada-xaajood otomaatig ah oo loogu talagalay dekedda naxaasta • Auto MDI ...
2 Dekedaha 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Switch Model ZJ-100102-25
2 Ports 10 / 100Mbps Ethernet Fiber Switch waa 100BASE-FX Ethernet naxaas warbaahineed oo leh 100Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 2 Port 10 / 100M Ethernet + 1 Beddelka Fibrada Furaha, Habka Keliya Faybaarka Labaad • Kala-badh ama wada-xaajood wada-xaajood buuxa ah • 10/100 Mbps wada-xaajood otomaatig ah ...